Mirga Yaada Ibsachuu - BBC News Afaan Oromoo
Mirga Yaada Ibsachuu
...tti maxxanfame 8:04 19 Hagayya 20218:04 19 Hagayya 2021
Gaazexeessaan Eertiraa waggoota digdamaaf hidhame akka gadhiifamuuf UN gaafate
Gaazexeessaan Ertiraa murtii tokko malee waggoota digdamaaf hidhame Daawwit Yisihaaq atattamaan akka hiikamuuf ogeessonni dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii (UN) gaafatan.
...tti maxxanfame 8:43 27 Adooleessa 20218:43 27 Adooleessa 2021
Hojjattoonni miidiyaa iyyannoo 'qaama bilisa baasuu (habeas corpus) galfatanii turan irratti poolisiin mana murtiitti dhiyaachuun deebii kenneen, shakkamtoonni kunneen gara Awaash Sabaattiitti dabarfamuu ibse.
...tti maxxanfame 17:50 15 Waxabajjii 202117:50 15 Waxabajjii 2021
'Paayileetichi Minisk qubachuu malee filannoo biraa hin qabu ture'
Paayiteetiin xiyyaaraa kallattii akka jijjiiratu godhamuun gaazixeessaa garee mormitootaa akka hidhamu taasise yeroo sanatti Minisk qubachuu malee filannoo hin qabu ture jedhame.
...tti maxxanfame 14:26 23 Muddee 202014:26 23 Muddee 2020
'Bara 2020 keessa gaazexessitootni 30 ajjeefamaniiru'-CPJ
Dhaabbatni walabummaa Pireesiifi gaazexessitootaaf dhaabatu 'Committee to Protect Journalists' jedhamu (CPJ) bara 2020 keessa gaazexessitootni 30 ajjafamuu bu'aa qoranno har'a baaseen ibse.
...tti maxxanfame 13:28 15 Muddee 202013:28 15 Muddee 2020
Itoophiyaafi Belaaruus biyyoota hidhaan gaazexeessitootaa ‘haalaan itti dabaledha’ – CPJ
Waggaa baranaa kana dura mul’ate sadarkaa hin beekneen gaazexeessitoonni hedduu hidhamuu isaanii mirga gaazexeessitootaaf kan falmu dhaabbatni CPJ har’a beeksise.
...tti maxxanfame 5:18 13 Muddee 20205:18 13 Muddee 2020
Iraan gaazexeessaa biyyattii tasgabbii dhowwe jette fanniste
Iraan gaazexessaa mormii biyyaaleessaa bara 2017 deeggaruun biyyattiitti tasgabbiin akka hin uumamne taasise jette du'an adabte.
...tti maxxanfame 10:31 23 Onkololeessa 202010:31 23 Onkololeessa 2020
Pirezedaant Isaayyaasiifi kaan RSF himata irratti bane akkamiin mana murtiitti dhiyeessuun danda'ama?
Dhaabbatni Gaazexessitootaa Daangaa Maleeyyii, 'Reporters Without Borders (RSF), damee Siwiidiin Pireezidantii Eertiraa Isaayyas Afawarqiifi aanga'oota biyyattii biroo torba irratti himata yakka namoomaa dhiyeesseera. Ofii qabiyyeen himannichaa maal fa'i?
...tti maxxanfame 11:01 22 Onkololeessa 202011:01 22 Onkololeessa 2020
Pirezidant Isaayyaas Afawarqiirratti himatni yakka namoomaa dhiyaate
Dhaabbatni Gaazexessitootaa daangaa maleeyyii, 'Reporters Without Borders (RSF), damee Siwiidiin Pireezidantii Eertiraa Isaayyas Afawarqii fi aanga'oota biroo torba irratti himata yakka namoomaa dhiyeesse.
...tti maxxanfame 8:58 15 Onkololeessa 20208:58 15 Onkololeessa 2020
Gaazexeessaa Tamasgeen Dassaalany hiikame
Gaazexeessaan Tamasgeen Dassaalanyi asiin dura waggoota sadiif hidhamee yeroo hidhaasaa xumuree baheera.
...tti maxxanfame 9:05 14 Onkololeessa 20209:05 14 Onkololeessa 2020
Gaazexeessituu ministeera duratti ibidda ofitti qabsiisuun of ajjeefte maaltu kakaasee?
Guyyaa gaazexessituun Raashiyaa, Iriinaa Silaaviinaa, ofitti ibidda qabsiisuun of ajjeeftetti abbaan warraashee Alekseeiin waan addaa omaa akka hin argiin dubbata.